मितेरीको सम्मान कार्यक्रम जुम्लामा बालसाहित्यमा पहिलो प्रयास साहित्यकार भानुभक्त पोखरेलको दुखद निधन स्रष्टा चौतारीको पन्ध्रौं शृङ्खला सम्पन्न हार्दिक श्रद्धान्जली
'चोकमा उभिएका नयनहरु' सार्वजनिक अन्तरराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन अमेरिकाको डिसीमा हुने रोल्पामा मोती जयन्ती भव्यताका साथ मनाइयो सत्रौं कोठे कविता गोष्ठीक कविताहरु
सत्रौं कोठे कविता गोष्ठी
स्मृतिको कुनामा अनुभूतिको एक पहाड ,(विद्या सापकोटा) म संस्मरण लेखौं भनेर बसेकी छु । स्मृतिको कुना–कुना अनुभूतिका थुम्काहरुले चुलिएका छन् । कतै ती कोमल बालअनुहारहरु ‘एक्क टाँका–एक्क टाँका’ भन्दै पछ्याउदैछन् त कतै चुरोटको सर्को आनन्दले उठाइरहेकी विकासे कार्यकर्ताको रवाफ झ्याम्मिरहेको छ । ‘विद्या ! तिमी त के सारो निष्ठुरी, कमसेकम एककल फोन त गर विचरालाई, मेरो नभएको प्रेमी सम्झिरहनुहुने/सम्झाइरहनुहुने बिपि दाजु र साधना दिदीहरु एकातर्फ हुनुहुन्छ नै । अर्कोतर्फ, झिङ्गे माछा भनेर प्लेटभरी सजाइएका गंगटाजस्ता पक्वानको गन्ध हो कि बास्नाले नाकलाई छोडेकै हैन । कृतज्ञ त हुने नै भए, त्यो अन्जान आत्माप्रति जसले नेपाली र भारुसहित झण्डै एकसय पचास डलर उदारतापूर्वक छोडेर पर्सको भित्रिकुनाको सय डलर मात्र टप्काएछ (जुनकुरा फर्केको भोलिपल्ट बैंकमा पुगेर मात्र थाहा पाउने हुस्सुप्रसाद मै हुँ ) । खोइ के लेखौं/के चाहिँ नलेखौं, लेखौं कि लेख्दै नलेखौं अल्छीका दुविधा बढ्दा छन् । खैं कुन अन्तरप्रेरणाले हो अक्षरहरु पोखिन लागे । त्यसो त डायरी लेख्ने बानि नभएपनि घर बाहिर रहदा वा यात्रारत हुदाँ दुइ हरफ नै सही, लेख्ने गर्छु । अहिले तिनै पानाहरु पल्टिरहेछन् सरर..... । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
रुखो मिजासको मेरो ठूलो भाइ म निस्कनै लाग्दा बडो मायालु बनेको थियो । किनकिन मनै भारी भएर आयो, बोल्न लाग्दा शब्दै घाँटिमा अड्किए झैं भयो । ‘लौ यो त रुन लागी’ मोटरसाइकल स्टार्ट गरेर पर्खिरहेको सानो भाइले जिस्क्याउन भ्याइहाल्यो । केही नबोली ड्याड–मम, भाइबैनी र बरपरका सबैलाई टाटा गरेर हुइकिएँ म, विमानस्थलतिर । हतार भएको बेला ट्राफिक जाममा फस्नु , आवश्यक परेको बेला फोन नलाग्नु त हाम्रा दीर्घ रोगहरु नै हुन् । त्यस्तै भयो, गंगबुदेखि नै शुरु भएको जाम एयरपोर्ट सम्मै जारी थियो । एनटिसिको नेटवर्क ब्यस्तताको भो कुरै नगरौं । उसै त चिसो झन् पानीका सिर्काहरु पनि खस्न लागे । लगातारको जाम र ढीला भयो भन्ने अत्यासले आँखाबाट बर्षन लागेको झरी भने बीचैमा रोकियो । त्यसो त म कुनै दूरदेशको यात्रामा वा लामो समय अबधिको लागि पनि जादै थिइनँ । तरपनि त्यो मेरो पहिलो अन्तराष्ट्रिय भ्रमण थियो । South Asia Social Forum को ढाका सम्मेलनमा सहभागी हुन जादै थिएँ म । पर्यावरणीय लोकतन्त्रमा लागी दक्षिण एसियाली संवाद (South Asian Dialog for ecological Democracy -SADED) को प्रतिनिधीको रुपमा, भ्रमणलाई ब्यबस्थित गरिदिने जिम्मेबारी बोकेको संस्था एक्सनएड नेपाल (Action Aid Nepal) को टिमसँग । सात बज्नै लाग्दा एयरपोर्ट त पुगे, मान्छे यत्ति कि म त हेरेको हेर्यौ भएँ । अनि पो ज्ञात भयो, किन विमानस्थलभित्र तीनघण्टा पहिल्यै छिर्न भनिदो रहेछ । सुनिन्छ, दैनिक तीनसयको हाराहारीमा श्रम बेच्न बिदेसिन्छन् रे नेपालीहरु । दिन दुइगुना रात चारगुना बिदेसिनेको संख्या बढिरहेको परिपे्रक्ष्यमा मलाई पनि कतिन्जेल बाबाआमाको काखमा लुपपुटिदै कुपुकुपु खाइरहन शरम नलाग्ला र ? खैर....यो पटक केही सिक्न, हेर्न र बुझ्नको लागि जादैं थिएँ म । ‘ल ल साढे आठ बजेको कतार एयरवेजका यात्रुहरु अगाडी पठाइदिनु’। ‘नौ बजे मलेसिया जानेहरुको प्लेन छुट्यो है ?’ हाहाकार नै हाहाकारमा दुइघण्टा चिप्लिसकेको थियो । धन्य मेरा शुभेच्छुकहरु, जसको फोन र एसएमएसले त्यो उकुसमुकुसमा भेन्टिलेसनको काम गरिरहे, गर्दै रहे । बल्ल–बल्ल भीडबाट उछिट्टिएर युनाइटेड एयरवेजको जम्मो विमानमा पुग्यौ हामी । हाम्रा रात्रिबसभन्दा कम्ती आँक्न नमिल्ने त्यो,‘जुन सिटमा बसे नि हुने रे ल’ निर्धारित समयभन्दा दश मिनेट ढिलो नौ पच्चिसमा काठमाण्डौंलाई किनारा लगाउदै क्षितिजमा उक्लियो । कृण्णभिरमा बस अड्के झैं घ्यार्याक्क.. कुलिर्दै बतासियो त्यो माथी–माथी–माथी । रातको अन्धकारले छोपिसकेको थियो, त्यस्तोमा देख्नु हेर्नु के थियो र ? यताउता चियाएँ । पाका र परिपक्व अनुहारदेखी म जस्तै र म भन्दा पनि कलिला अनुहारहरु यात्रारत थिए,महिला–पुरुष झण्डै बराबरी । अचम्म त तब लाग्यो जब थाहा भयो, ती सबै मलेसिया जादै रहेछन् । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार भएर जानु सहज कुरा हैन, सुनिदै आएको कुरा हो तर सुनेर के गर्नु ? पापी पेट छ, परिवार छ । सायद भविष्यका सपना पनि हुदो हो ती निश्चल आँखाहरुमा जो लुक्दै बगिरहेका थिए । उफ्........ चिमोटिएँ भित्रैदेखी । घत्याक्क..... सोच्दासोच्दै झकाएछु क्यार, जीवनमोहले कक्रक्कै पार्यो । तल पिलपिल जुनकिरी झैं बलिरहेको ढाका शहर थियो । मौसम अपेक्षाकृत सफा नभएकोले केहीबेर आकाशमै फन्को लगाउदै विमान ओर्लियो । भर्खरै पानी रोकिएको रहेछ । स्वागतार्थ उपस्थित थिए,भिजेका भूई र बंगाली हावाको नुतन स्पर्श । अध्यागमनका सानातिना कारबाही पछि होटल प्यासिफिक इनको प्ले कार्ड लिएर उभिएका खान दाजुसम्म पुग्यौ हामी । यतिबेलासम्म हाम्रो एघारजनाको टोली एकिकृत भैसकेको थियो, होटलको प्राइभेट गाडी केहिबेरमै गुड्यो सररर... । झिलिमिली बत्ती, सानाठूला बगैचाहरु, तुलनात्मक सफा सहर आफ्नै पूर्वी शहर धरानको याद आयो मलाई । हाम्रो भन्दा बीस मिनेट छिटो बंगलादेशको घडीमा बाह्र बज्नै लाग्दा बनानीस्थित होटल प्यासिफिक इनमा भित्रियौ हामी । दोश्रोदिन बिहान अबेर गरी आँखा खुल्यो । घामको किरणले चुम्दा जीवनले नयाँ रङ्ग पायो । सम्मलेन त भोलिपल्ट (-Nov 18 _) देखि थियो, हामी टिकटको समस्याले गर्दा दुइदिन अघि (Nov 16) नै त्यहाँ पुगेका थियौ । बीचको यो दिन हाम्रो लागि फुर्सदी दिन, बिहानको नास्तापछि घुमघाममा निस्कियौ (कपिल काफ्ले जो नेपाल समाचार पत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ बाहेक) हामी दशजना । होटलका मार्केटिङ मेनेजर बाटैमा भेटिए, बाटैमा छुट्टिए । बाँकि हामी मनमौजी पाराले यतायता रल्लियौ । यात्रामा पारङ्गत दाजुदिदीहरु यो ठाउँ त दिल्ली जस्तो, यो कलकत्ता जस्तो, यो कहाँ जस्तो... भन्दै तुलना गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हुदाहुदा, हाम्रा बाग्मती र बिष्णुमती किनारालाई मात दिने फोहरी र अस्तब्यस्त बस्तीहरु पनि भेटिए । अनि रुद्र दाइहरु भन्न थाल्नु भो, यो जनकपुर जस्तो पो रछ । आ–आफ्नै अनुभूतिका पुन्तुरा कस्दै हिडिरहेथ्यौ हामी, केही किन्दै र केही किनेजस्तो गर्दै । त्यस्तैमा आइपूग्यो, बनानी सुपरमार्केट । बिपि दाजु र गणेश दाजु कुन्नी के किन्न भित्र छिर्नु भो, हामी परिबेश नियाल्न । ’एक्क टाँका, एक्क टाँका‘ को स्वर लहरी गुन्जियो कतैबाट । हेर्छु त, हाम्रोतिर गोरा छालाका मान्छे देख्नासाथ बुझ्नु न सुझ्नु पछ्याउनेहरुको ताँती लागेजस्तै, त्यहाँ एक्क टाँका भन्नेहरुको लर्को लागिसकेछ । आफूसँग खुल्ला टाँका भए न दिने हो (?), थियो त भर्खरै साटिएको हजार र पाँचसयका नोटहरु । त्यही दिएर तिनहरुसँगै हिड्न पनि नसकिने उफ्..... कत्रो समस्या । न आफूले बोलेको बुझ्छन् तिनीहरु, न त तिनले बोलेको आफू बुझिन्छ । नेपाली पैसा देखेर आफैं पन्छिएलान् की ? जुक्ति निकाले तर पासा उल्टियो । हेर्दाहेर्दै, बोली नफुटेकादेखी कपाल पाकिसकेका पचासौ माग्नेहरुको घेरामा फसेँ म । अनि त सुपरमार्केटका सिभिल सेक्युरिटी, स्थानीय बासिन्दा र हाम्रो टिमै भएर खेद्नुपर्यो । मलाई दुःख छ, त्यो बिचरी एउटी बच्चीप्रति, जो आफ्नो झुण्डसहित होटलसम्मै आइरही, अन्ततः ल्याम दाजुको पिटाइ पाएर फर्की । यसरी अन्धाले हात्ति छामेजस्तो नजर–नजरमा ढाका बदलिदै गयो । साँझ गुल्सन बजारतिर लाग्यौ हामी । गुल्सन एक र गुल्सन दुई त्यहाँका स्थानीय, केही चलेका बजारहरु । बजार नीति भने हाम्रै पाराको । बार्गेनिङ गर्न सके सक्यो, सकेन चुलुम्मै । तेश्रोदिन ढाका युनिभर्सिटीमा सम्मेलन शुरु हुने दिन । कार्यक्रम त साँझ शुरु हुनेवाला थियो तैपनि त्यहाँको ब्यबस्था के रहेछ बुझौं न त भनेर लाग्यौ हामी (अघिल्लो साँझ मात्र आइपुग्नुभएका एक्सनएडका राजकुमार त्रिखत्री दाजुसहित बाह्र जना) । के अचम्म हो, अघिल्लो दिन हाम्रो जनकपुर जस्तो लागेको ढाका शहर त्यो दिन पुरै अर्को पो थियो । दुरदर्शी पाराले बनाइएका फराकिला सडक, चोकचोकमा कुदिँएका बंगाली सभ्यता र विरतामा मानक चित्रहरु, माथीतिर आँखा उचालेर हेर्नुपर्ने भब्य भवन । ‘कसो ढाका भन्नु त जनकपुरजस्तो रहेछ’ भनेर फेसबूकमा लेखिएन वा ट्विट गरिएनछ है ? एकअर्काको मुखमा हेर्दै हास्ने क्रम रोकिएकै थिएन, हाम्रो गाडी रोकियो । सहिद मिनारको आडैमा रहेछ युनिभर्सिटी । भारतीय, पाकिस्तानी, फ्रान्सेली, श्रीलंकन, बंगाली, नेपाली ........ असमान र अपरिचित अनुहारहरुको ब्यस्ततत् संगम । संसारमा सबैले बुझ्ने साझा भाषा ‘मुस्कान, साटफेर हुदैं गए, उत्सुक नजरहरु छरिए यत्रतत्र । लौ, कार्यक्रम शुरु हुने दिन भएर पनि केही सुरसारै छैन । न स्टेज बनाइएको छ, न ब्यानर नै आइपुगेका छन् । बस्...स्टल राखिएको छ, सहभागिता फर्म भर्न । 'ब्यबस्थापन चाहिँ फितलै हुदोरहेछ है तिमीहरुको पनि' मनोबादमा अल्झदै पाँच–पाँच डलरको फर्म भरेर फर्कियौ हामी होटल प्यासिफिकतिर । ‘यतै खाना खाएर जाउ न हुन्न ?’ प्रस्ताव हामीमध्ये कसैको थियो । स्विकृतीको लाहाछाप स्वरुप बसुन्धरा सुपरमार्केट नजिकै ब्रेक लाग्यो गाडीको । खाना त त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो जस्तो बसेको होटल, अन्य होटेल वा युनिभर्सिटी–क्यान्टिनको । बिचित्रको काइदा, म भेज खान चाहन्छु भनेपनि (मौसमी तरकारी हुनसक्छ लौका र मूला) लौका–मूलामा मासुको रस मिसिएर आउने, म मासु खाना खान्छु भनेपनि मासुमा लौका,मूला मिसिएर आउने । माछाको त आफूलाई (सु)गन्ध पनि मन नपर्ने । फेरी हाम्रोमा जस्तो थालमा पस्किएर कसले देओस् ?आफू अघिल्तिर आफूभन्दा ठूला बाटाभरी राखिएका भातका रास, जति मनलाग्छ लियो खायो । ‘मन चंगा भए लोटाँ गंगा’ भनेजस्तो जूठोचोखो बाल मतलब । त्यति नै बेला कसैले जिस्क्याइदिन्थ्यो, ‘विद्या मासु त गाईको हो रे ।’अनि त के चाहियो ? खादा–खादै पेट बटारिएर आउथ्यो ‘ह्वाक्क’। म त अझ साहाकारी हैन, साहाकारीहरुको हालत ... (?) । खाना चाँहि खाइन्न अब, तेश्रो साँझदेखी प्रतिज्ञा नै गरे मैले । ब्लडप्रेसर घटेर टाउको फुट्न खोज्दाको पीडा पनि त राम्रै भोगेँ नि । १८ नोभेम्भर साँझ उद्घाटनपूर्वको र्यालीमा मिसिदै सम्मेलनमा सहभागी भयौं हामी । १९, २० र २१ मा त्यहाँ खास कार्यशालाहरु भैरहे । अन्य राष्ट्रसगै नेपालबाट पनि दलित, महिला, अल्पसंख्यक, सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरुको ठूलो समुह त्यहाँ पुगको रहेछ । थोरै सख्या विमानबाट, धेरै बस र ट्रेनबाट । बिश्वभरबाट २०,००० सहभागीको अनुमान गरिएको त्यो सम्मेलन बिशेष त "Democracy for Social Transformation in South Asia: Participation, Equity, Justice and Peace" नारामा केन्द्रित थियो । नेपाली संस्थाहरुका तर्फबाट पनि प्रशस्तै कार्यशाला,गोष्ठिहरु भए । Gender & Equality/ Globalization, Justite & development/Responsive Governce/ Human Right & Dignity/ Food Sovereignty and Livelihood Security/ Socialism vs Communism लगायतका छलफल,गोष्ठिहरुमा रह्यौ हामी । जुन विषयको दायरा विश्व सामाज हुदैं दक्षिण एसियाली समाजसँग सबन्धित थियो । यहाँ रहदा हामीले जतिसुकै केही गर्न सकिएन र भएन भन्दा पनि हाम्रोमा पनि तुलनात्मक रुपमा केही न केही त भैरहेकै छ । सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा कतै न कतैबाट पाइला त बढाउन थालिएको रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यो भन्नका लागि मात्र भनिएका कुरा हुन् भने त सबन्धितलाई मात्र थाहा होला ।
विमानको धर्म उड्नु, उड्यो निर्धारित समयमै उही शिल्पी मुस्कानवाली एयरहोस्टेजसहित । उड्यो मन, जहाजको टुक्रेझ्याल हुदैं कताकता । लाग्यो, क्षितिजमा कोरिएको इन्द्रेणी रेखा पछ्याउदैं सयररत नजरहरु ‘टाढा भनेर जान नसकिएको कल्पनातीत समुद्र्र’ (देखिएको क्षेत्र समुद्र नभएर समुद्रको कल्पना मात्र पो थियो कि?) मा चोपलिए । जे–जे देखिए, जस्तो–जस्तो देखियो, देखिन्जेल हेरियो । निष्पट्ट भएपछि जहाजभित्रै कैद भए उत्सुकताहरु, तर चिसिन नपाउदै भेटिए केहि आक्रोशका राँकाहरु । जसलाई दलालले मनग्य ठगेछन् र कामको करार पनि असमय मै सकिएछ । आवेगका झिल्काहरु झलमलाउदै गर्दा देखा पर्यो, घर्लम्म साँझको घुम्टो ओडेको मेरो काठमाण्डौं । बालाचतुदर्शीको महाजाममा बन्दी रहेछ शहर । दुःस्वप्नहरुले कायल म भाइ आइपुग्नासाथ टाप कसे। अहिले, संस्मरणका टाकुराबीच अदबकासाथ अग्लिएको छ ’पहाडविहीन (त्यहाँ कुनै टाकुरा नै थिएनन् वा गगनचुम्बी महलले छेकिए, त्यो म जान्दिन)¬ ढाका यात्रा ।‘ तमाम यादमा बीच उसैगरी उभिइरहेको छ एउटा जिज्ञासा, ‘अरु त अरु, नेपालीले समेत किन मलाई पाकिस्तानी ठाने/सोचे ?’